Iindleko zeNdlu ye-Hyperbaric - I-HBOT Indleko yonyango lwe-Oxygen Hyperbaric
ikhaya/Ithenda ye-Hyperbaric Yokuthengisa - I-Hyperbaric Therapy ye-Oxygen HBOT/Iindleko zeNdlu ye-Hyperbaric - I-HBOT Indleko yonyango lwe-Oxygen Hyperbaric
Iindleko zeNdlu ye-Hyperbaric - I-HBOT Indleko yonyango lwe-Oxygen Hyperbaricteknamfg2018-04-11T09:06:48+00:00
Iindleko zeNdlu yeHarperbaric
Izinto ezichaphazela iNkcitho yeNdlu ye-Hyperbaric.
Chamber of Hyperbaric Iindleko zichaphazelekayo kwizinto ezininzi. Ubuninzi beenguqu kwiindleko ziphumo ezikhethiweyo zezikhethiweyo ezikhethiweyo Unyango lwe-Oxygen Hyperbaric Inkqubo yeNkundla (HBOT). Olunye uhlobo lweNdlu ye-Hyperbaric Izindleko ezihlukeneyo zivela kwiimfuno ezizodwa zokugxininisa kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe.
I-Monoplace Hyperbaric Chamber: Uphatha isigulane esinye.
Multiplace Hyperbaric Chamber: Uphatha izigulane ezininzi.
I-Monoplace: 32 "- 40"
I-Monoplace: I-Stretcher edibeneyo, Umlawuli we-Touchscreen, Uphulo lwe-Air Automatic, Ulawulo lwemozulu, i-oksigen Evaporator
I-Multiplace: Umlawuli wesikrini, i-Control Control, i-Compressedor ye-Medical Air, i-Air Dryers, i-Resting Floor
Ezi zilandelayo zikhetho ezinokuchaphazela kakhulu iindleko zeNdlu ye-Hyperbaric I-Monoplace Hyperbaric Chambers kwaye Multiplace Craper Hyperbaric. $
Multiplace Hyperbaric Chamber Cost: i $
I-Monoplace Hyperbaric Chamber Cost: i $